७ भदौ, चितवन । घाम अस्ताउने तयारी गर्दै थियो । चितवनको रत्ननगर नगरपालिकाको खोला छेउमा लोक तथा दोहोरी गायक मिलन लामा स्कुले बालबालिकाहरुलाई लाइनमा मिलाउँदै थिए । काँधको निलो गम्छाले पसिना पुछ्दै साना बाबुनानीहरुलाई लाइनमा मिलाएर राखिसकेपछि लामाले कापी, किताव, झोला, पेन्सिल र कटर बाँड्न थाले । कोही खाली खुट्टै त कोही कपडा नै...
७ भदौ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारतको पाँच दिने राजकीय भ्रमणका लागि भारत प्रस्थान गरेका छन् । ४८ सदस्यीय टोलीको नेतृत्व गर्दै देउवा नेपाल वायुसेवा निगमको उडानमार्फत बुधबार बिहान १० बजे त्यसतर्फ प्रस्थान गरेका हुन् । भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा देउवा भारत भ्रमणमा निस्केका हुन् । देउवाको यो भ्रमण प्रधानमन्त्री भएपछिको...
७ भदौ, सुनसरी । सुनसरी सदरमुकामसमेत रहेको इनरुवा नगरपालिका–१० कि कुसमीदेवी रामको एक हप्ता अगाडि आएको विनाशकारी बाढीले घरमा भएको सबै थोक बगायो । तर उनले अहिलेसम्म राहत पाउन सकेकी छैनन् । कारण थियो, उनले दोस्रो चरणको स्थानीय तहमा गरेको मतदान । आफू एक पार्टीमा सक्रिय भएको र आफ्नो वडामा अर्कै पार्टी विजयी भएका कारण...
बाढीपीडितलाई माओवादी केन्द्रले दियो ३५ लाख
७ भदौ, काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले बाढीपीडितलाई ३५ लाख सहयोग गरेको छ । माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री राहत कोषमार्फत ३४ लाख ९९ हजार २ सय ६० रुपैयाँ सहयोग गरेको हो । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले बुधबार बिहान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ३४ लाख ९९ हजार २ सय ६० रुपैयाँको चेक हस्तान्तरण गरे । तराईका जिल्लामा...
७ भदौ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारतको पाँच दिवसीय राजकीय भ्रमणका लागि आज त्यसतर्फ जाँदै छन् । देउवाले प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलोपटक विदेश भ्रमण गर्न लागेका हुन् । देउवा नेपाल वायुसेवा निगमको बुधबार बिहान १०ः३० बजेको नियमित उडानबाट नयाँदिल्लीतर्फ प्रस्थान गर्ने कार्यक्रम छ । भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा त्यसतर्फ जान लागेको देउवा...
६ भदौ, राजबिराज । गैरआवासीय नेपाली संघले सप्तरी जिल्लाको बोदेबर्साइन नगरपालिकाका बाढीपीडितलाई राहत बितरण गरेको छ । संघले नगरपालिकाका झण्डै एक हजार पाँच सय परिवारलाई त्रिपाल, झुल र खाद्यसामाग्री बितरण सुरु गरेको छ । मंगलबार साँझ अबेरबाट सुरु भएको राहत बितरण बुधबारसम्म चल्ने छ । आइतबार राती साढे ८ बजेसम्म झण्डै ६ सय परिवारले...
६ भदौ, काठमाडौं । राष्ट्रिय जनता पार्टीले संविधान संशोधन विधेयक असफल भएपछि मुद्दा स्थापित गरेको भन्दै सन्तोष व्यक्त गरेको छ । संशोधन विधेयक फेल भएपछि राजपाको पदाधिकारी बैठक मंगलबारबाट सुरु भएको छ । १३३ पदाधिकारी मध्ये ९८ जना उपस्थित थिए । बैठक बोल्ने ५३ जना पदाधिकारी मध्ये अधिकांशले प्रदेश २ को चुनावमा जानु पर्नेमा...
६ भदौ, काठमाडौं । आर्थिक वर्ष ०६५/६६ मा ढुंगा, गिटी भारत पठाएवापत नेपाल सरकारले पाएको राजश्व जम्मा एक करोड थियो । त्यसवापत बिग्रेको सडक भने पाँच सय किलोमिटर । प्रतिकिमि एक करोडका दरले उक्त सडक पुनर्निर्माणका लागि पाँच अर्ब रुपैयाँ लाग्छ । तीव्र गतिमा दौडाइएका टिप्परको ठक्करबाट ६० जनाको मृत्यु भयो, त्यस वर्ष ।...
६ भदौ, काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले नयाँ शक्ति र नेकपाका नेताहरुलाई पार्टीमा स्वागत गर्दै अब कुनै पनि तागतले माओवादीलाई हराउन नसक्ने बताएका छन् । प्रचण्डले माओवादी धाराका सम्पूर्ण क्रान्तिकारी घटकहरुलाई एक हुन अपिलसमेत गरे । नयाँशक्तिबाट विद्रोह गरेका देवेन्द्र पौडेल नेतृत्वको समूह र नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाबाट विद्रोह गरेका पदम...
६ भदौ, काठमाडौं । संघीय नेपालका प्रदेशका नाम के हुने छन् ? र, तिनको राजधानी कहाँ-कहाँ राखिने छ ? सरकारी अधिकारीहरुसँगै यसको चित्तबुझ्दो जवाफ छैन । प्रहरीले भने सातै प्रदेशमा विशिष्ट श्रेणीका अधिकारीलाई कमान्ड सुम्पेर राजनीतिभन्दा अगाडि नै आफ्नो उपस्थिति जनाएको छ । यसअघि अदालत र सरकारी वकिलका संरचना पुगेका छन्, प्रदेशहरुमा । सरकारले...
कटैया-कुशाहा प्रसारणलाइन देउवा र मोदीले संयुक्त रुपमा उदघाटन गर्ने
६ भदौ काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले कटैया कुशाहा १ सय ३२ केभी प्रसारणलाइनकोे संयुक्त रुपमा उदघाटन गर्ने भएका छन् । प्रधानमन्त्री देउवा भारत भ्रमणमा रहेका बेला बिहीबार यो प्रसारणलाइनको उदघाटन हुने भएको छ । देउवा भारत भ्रमणका लागि बुधबार त्यसतर्फ प्रस्थान गर्दैछन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक...
६ भदौ, भैरहवा । आयल निगम जग्गा खरिद अनियमितताबारे अध्ययन गर्न संसदीय टोली भैरहवा पुगेको छ । व्यवस्थापिका संसद अन्तर्गतको उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समिति मातहतको आपूर्ति उपसमितिले पेट्रोलियम भण्डारणका लागि नेपाल आयल निगमले खरिद गरेको विवादस्पद जग्गा रोहिणी खोलाको स्थलगत अनुगमन थालेको हो । उप-समितिका संयोजक सुभासचन्द्र ठकुरी संयोजकत्वमा सांसद बुद्धिराम...
« अघिल्ला 12345 … 1,977 पछिल्ला »